Tahriibka Sharci Darada Ah Iyo Dhibaatooyinkiisa | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Faysal Maxamuud — May 31, 2018
Suudalku/tahriibku waa socdaal aan ogolaasho loo haysan badanaaba dadku u qoraan qaab Af Soomaali ah oo ka soo jeeda Af Carabi. Erayga Tahriib wuxuu ugu batay Af Soomaaliga in dhulka la sii maro uu u badanyahay dhul Carbeed, inta u dhexaysa Suudaan illaa iyo Liibiya oo ah halka badda looga sii gudbo Yurub. Socodkii waa tahriib, dadkii waa tahriibayaal, qabanqaabiyaalka waa tahriibiyeyaal oo marka dambe isku rogga magafe. kaas oo marka dambe dhuyaal socodka faramariya (dhaqaale ahaan) ama naftoodaba halis geliya. Suudal waa hayaan inta badan ay ku talaabsadaan dadka ka dhoofaya dhulkooda iyagoo sii marayo xaduudo ilaalsan ujeedkooduna yahay inay dhuumaalaysi iyo habeen guure ku maraan dhulkaas iyo xaduudadahaas ilaalsan.
Qofka u bareeraa socod suudal ama dhuyaal ah wuxuu ku tala galaa geeri iyo nolal inuu ka miro dhaliyo socdaalkaas. Suudal waa isbiimayn socdaal kaas oo aan lahayn ammin go’an balse leh kalahaad ama jarmaad hore, guure, baqool ama dhalandhool, iyo socod lug iyo wixii gaadiid la heli karo la dulsaarnaado dharaar iyo habeen tan iyo inta laga gaarayo meelo astaamaysan oo gashiimaysi loogu sii nasto.
Geeri ka timaada daalka, xanuuno ka dhasha socodka dheer, jir dil ama birayn ama toogasho bareer ah.
Dhibaatada suudalka waxaa ay dhibaato raagto ku ridaan qofka, qoyska iyo qaranka uu ka socdaalay wiilka ama gabadha dhuyaalka go’aansaday. Dhul lama degaan ah, xaduudo la ilaalsanayo iyo bado la raaco doomo aan tayo lahayn oo inta badan dadku ay ku harqadaan ayaa u dambaysa qofka doorbiday socdaal suudal (tahriib) ah. Qoyska suudal socdaalaha ayaa maal aduun ku baxsha marka uu magafe gacanta ku dhigo wiilkoodii ama gabadhoodii soo joog laga kari waayey.
Tags: Tahriibka Sharci Darada Ah Iyo Dhibaatooyinkiisa
Next post Dalalka Tahriibka Lagu Sii Maro
Previous post Wuxuu Itoobiya u Xirnaa 11 Sano, Haddase Muxuu Qabani Karaa?
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Wuxuu wax ka qoraa arrimaha bulshada, caafimaadka. Waana qoraa aqoon dheeraad u leh qorista afka Soomaaliga, waa aqoonyahan da'yar. Qoraaga wuxuu shahaadada heerka koowaad ee bachelor degree ka haystaa Caafimaadka dadweynaha (public health).